Dhaqaatiir fuliyay qalliinka wadnaha xilli uu dab ka holcayay dhismaha ay ku jireen gudihiisa - Wardeeq 24 TV Dhaqaatiir fuliyay qalliinka wadnaha xilli uu dab ka holcayay dhismaha ay ku jireen gudihiisa Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Dhaqaatiir fuliyay qalliinka wadnaha xilli uu dab ka holcayay dhismaha ay ku...
Dhaqaatiir fuliyay qalliinka wadnaha xilli uu dab ka holcayay dhismaha ay ku jireen gudihiisa
Dhaqaatiir fuliyay qalliinka wadnaha xilli uu dab ka kaco dhismaha ay ku jireen
Koox dhaqaatiir ah oo ku sugan isbitaal ku yaal Ruushka ayaa ku guuleystey inaan dhammeystiraan qalliin furan oo wadnaha ah oo ay ku qanacsan yihiin bukaan iyadoo ay jiraan damiyeyaashuna ay la tacaalayaan daminta dab-demiska oo ka kacay saqafka kore ee dhismaha.
In ka badan 120 qof ayaa laga saaray dhismaha mana jiraan dad ku faafaya dabka oo ka kacay isbitaalka Blagoveshchensk ee ku yaala bariga fog ee Ruushka.
In dhaqaatiirtu ay qalliinka sii wataan waxaa fududeeyay xargaha dabka ee dabaqa hoose ee qolka tiyaatarka oo si buuxda u shaqeynaya iyo marwaaxadaha oo qiiqa banaanka loo soo saaray.
Bukaankii qalliinka wadnaha lagu sameyay ayaa sidoo kale goor dambe laga soo saaray dhismaha.
Dhaqtarkii hogaaminta kooxda qalliinka Valentin Filatov ayaa sheegay in la jecelyahay “inay ahayd inaan badbaadiyo qofkan wax walbana waan dhacay”. Siddeed dhaqtar iyo kalkaaliyeyaal ayaa ku howlanaa qalliinka oo qaatay labo saacadood, isgaoo bulshada waxyar ka dib markii uu dabku ka kacay dhismaha.
Wasiirka Gargaarka degdegga ah ee Ruushka ayaa sheegay in isbitaalka uu saameynayo sanadkii 1907 xilligii loogu talagalay, isla markaana uu ku dhex faafayo dhismaha saqafka dhismaha oo alwaax ka sameysan.
Dhaqtar Antonina Smolina ayaa yiri “ma jiran walwal” ay qabeen hawlwadeen isbitaalka.
barasaab goboleedka Amur Vasily Orlov ayaa amaanay shaqada kooxda qalliinka iyo dabamiyeyaasha oo damiyay dabka. Aad ayaan ula qorsheynayaa in la siiyo abaal marinno.
Waa isbitaalka kaliya ee gobolka ku yaal ee leh qeybta wadnaha.
Previous articleWaxaa Maanta Teendhada Afisyoone Ka Furmaya Shir u Dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka iyo Madax Goboleedyada
Next articleQuwadaha caalamka oo cambaareeyey “xad gudubka xuquuqda aadanaha” ee ka dhacay gobolka Tigray ee Ethiopia